ब्रेकिङ न्युज: पक्राउ परे निर्मला पन्तको हत्यारा, पहुँचवाला भएर पक्राउ गर्न सकिएको थिएन प्रहरी !! पुरा हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > ब्रेकिङ न्युज: पक्राउ परे निर्मला पन्तको हत्यारा, पहुँचवाला भएर पक्राउ गर्न सकिएको थिएन प्रहरी !! पुरा हेर्नुहोस
ब्रेकिङ न्युज: पक्राउ परे निर्मला पन्तको हत्यारा, पहुँचवाला भएर पक्राउ गर्न सकिएको थिएन प्रहरी !! पुरा हेर्नुहोस
काठमाण्डौं, २६ माघ– बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका हत्यारासम्म पुग्न सफल भएको दाबी नेपाल प्रहरीले गरेको छ ।
निर्मलाका हत्यारा पत्ता लागे पनि उसको परिचय गोप्य राखिएको छ ।
यसअघि दिलीपसिंह विष्टसहित प्रहरीले घटनामा संलग्न भनी सार्वजनिक गरिएकाहरु डिएनए परीक्षण नमिलेपछि छुट्दै आएका छन् । यसपटक पनि त्यस्तै नहोस् भन्नका लागि सजगता अपनाउँदै दोषी सार्वजनिक गर्न हतार नगरिएको दाबी प्रहरी स्रोतको छ । यसपटक भने डिएनए परीक्षण समेत मिलेको स्रोतले बतायो ।
हत्यारा निर्मलाकै घर आसपासका व्यक्ति भएको र उसले पटकपटक बलात्कार घटना घटाएको बताइएको छ । यद्यपि पहुँचवाला भएका कारण अहिलेसम्म कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको दाबी प्रहरीको छ । निर्मलाको गत १० साउनमा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो ।
साभार : सिधान्युज डट कम बाट
मेघा बिरामी हुँदा आत्महत्या गर्न खाेजे , यती धेरै बेईजत बनाएकी बाहिर निस्कन गाह्राे छ (भिडियो)
एक्कासी हेलिकप्टर चार्टर गरेर रबि लामिछाने पुगे म्याग्दी! यस्तो छ कारण!